७८४ पटक पढिएको
२०१४ सेप्टेम्बर २८ को दिन फिलिपिन्स,
विगतका ५ वर्ष झैँ, यो वर्ष पनि मलाई इलाम जाने रात्रि बसको टिकटको कुनै आवश्यकता छैन । दिनभर ठेलमठेल गरेर दशैं आउनासाथ टिकटको मूल्य बढाएर मौकामा हाम्रा खल्ती चुस्ने व्यवसायीहरूलाई उल्टै धन्य हजुर तपाईंको सेवा भनेर नक्कली हाँसो हाँसिदिनुपर्ने बाध्यता थिएन । न त घर जान पाइने भयो भनेर आउने साँच्चैको कान्ति नै मुहारमा थियो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा दशैं आउने बेला क्यालेन्डरमा देखेर यसो मनमनमा घरसम्मको याद आउँथ्यो तर यसपालि दशैं आउने उत्सुकता त परै जाओस् दशैं नै आउने दिन राम्रोसँग याद पनि थिएन ।
मङ्गलबारको दिन थियो । अनि मेरो त्यही पढ्ने, ड्युटी गर्ने दैनिकी । मेरो लागि न यो घटस्थापना हो न नवरात्रको पहिलो दिन । म त रातभर अनिँदो बसेर अस्पतालको ३६ घण्टे ड्युटी सकेर कोठामा पुगेको लखतरान मान्छे । अनि आजको दिन मेरो लागि ३६ घण्टाको ड्युटी सकेर सुत्ने दिन । ३६ घण्टामा बेलामौका आधा÷ एक घण्टा आँखा बन्द गर्न पाएर ड्युटी गरेर बिताएको मान्छे जब सुत्छ तब उसलाई न जमराको यादले घोच्छ न कानमा लगाउने सयपत्रीको स्पर्शको कल्पनाले बिझाउँछ नै ।
फ्रिजमा राखेको दुई दिन अघिको बासी सब्जी र भात माइक्रोवेभमा तताएर त्यही तातो प्लेट हातमा बोकेर, बल्लबल्ल भात खान पाएकोमा खुसी हुँदै म ओछ्यानतिर लाग्छु । बिहान पाँच, साढे पाँच बजे बिउँझदा आधा खाना भएको प्लेट काखमै थियो, अगाडि ल्यापटप चहकिलो उज्यालो दिएर बजिरहेको थियो । मेरो हिजोको थकानले निदाएको नि पत्तो भएन । म उठ्दा आज बुधबार थियो, मलाई त्यो दशैंको दोस्रो दिन कुनै दृष्टिमा नि लागिरहेको थिएन ।
ल्यापटप बन्द गरेँ । म उठेको थाहा पाएर बाहिर मेरा कुकुरहरू भुकिरहेका थिए । मेरो वास्ता गर्ने यिनै दुई थिए । मैले किनेर ल्याएर आफ्नो जीवनमा थपेका परिवारका दुई सदस्यहरू ‘म्यागी र काले ।’ मैले आँखा मिच्दै मेरो प्लेटमा रहेको खाना लगेर दुवैलाई थोरैथोरै दिएँ । म्यागीले खाएन, तीन दिनको बासी भात के खाओस् । फेरि घरबेटीले हिजो बिहान म ड्युटी जाँदा दिनू है भनेर छोडेको कुकुरले खाने दाना नि दिएकै थिए होला ।
बाहिर घाम लागिसकेको थियो । पानी पर्ने अनि घाम लाग्ने दुई वटा मात्र ऋतु हुन्थ्यो फिलिपिन्समा । टन्टलापुर घाम लागेर होला, बाहिर अम्बकका रुख मुनिका हरिया घाँस आलस्यमा थिए । घरबेटीका कुखुरा बेलाबेला कराउँदा मेरो तातेको टाउको अझै झनक्क भएर आएको पनि हो । नेपालमा सयपत्री र मखमली फुल्ने बेला हो यो । म यहाँ पट्यार लाग्दो घाममा सुक्दै गरेका लुगा हेर्नबाहेक के नै गर्न सक्थे र ? न अलैंचीबारीमा ज्याकेट ओछ्याएर तास नै खेल्न मिल्थ्यो, न मूलबाटोमा पिल बनाएर खोप्पी खेल्न नै ।
आजकाल त कोदालो बोकेर बाटो सफा गर्दै, ठूलो धारा जाने बाटोको लेउ पनि खुर्किनु पर्दैन थियो । शरदमा रोकिएको पानी अनि पारिला बगैँचामा उडिराखेका कालाकाला कागे कीराहरूलाई उफ्रँदै झप्पा हानेको, मुठीमा समाएर केही क्षण बन्द गरेर उडाएको सम्झँदा मलाई कता कता साँच्चै दशैं पो आयो त है भनेर मन न्यास्रो नि हुन्थ्यो । तर यस्ता दशैं कति आए, कति गए । अनि कति त म नजिक आउँदै नआई गए, जसरी अहिले एउटा आएको छ ।
सानो छँदा दशैंमा जुठो परेर टीका लगाउन नपाउँदा मलाई खुब रिस उठेर आउँथ्यो, लाग्थ्यो मर्ने मान्छेले किन दशैंको दिन कुरेको होला ? आज म डाक्टर अनि मेरो ड्युटीमा दिनदिनै मर्ने कति बिरामीहरू । आफ्नै नभए पनि आफ्नै रेखदेखमा मर्ने मान्छेको जुठो नलागे नि दया, माया त पक्कै लाग्थ्यो । यस्तोमा दशैं मनाउनु कि नमनाउनु ? फेरि मेरो क्यालेन्डरमा रातो अक्षरमा छुट्टीको सङ्केत नि त गरेको थिएन । न मेरो दिमागमा दशैं थियो न आँगनमा सयपत्री, न पूजाकोठामा टुसाउन थालेको जमरा ।
समुद्रमा नेपालभर पुग्ने जमरा छर्न मिल्ने गरीको बालुवा थियो । तर मलाई जमरा राख्ने कुनै धोको थिएन, न मसँग टुसाउने बीउ धान, गहुँ जौका गेडाहरू नै थिए । अचम्मको कुरा फिलिपिन्समा रातो अबिर पाइँदैन, न त यहाँ टीका मुछ्ने दही पाइएला । प्लेटमा गाई छ्यापछ्याप्ती पाइने देशमा म मेरो विक्रम संवतको हिन्दू पात्रोको रातो अक्षरले लेखेको रातो टीका लगाउने दिन पर्खाइमै सीमित थियो । मेरो लागि यो पाली नि त्यो दिन आएन, सत्य हो विगत ६ वर्षदेखि त्यो दिन आएको छैन ।
न त मलाई नयाँ लुगा लगाएर मावल जाने जोश नै छ, न त मलाई अम्लिसो घारीमा गणेश दादा, राधेश्याम दादा, काइँला अनि यामबहादुर दाइसँग फलाँस खेल्ने नै रहर छ । गएको धेरै वर्ष नहालेको फलासको ब्लाइन्ड यो पाली पनि नहालिने भइयो । आ जाओस् यो पाली पनि, मलाई कुन हतार छ र ? लिङ्गे पिङमा पोखरीको माथि छाया बन्नेगरी मलाई कुरुरु गरेर पिङ तेस्र्याउन खुट्टा उचाल्नु पनि पर्दैन ।
बाहिर गएर भर्रभर्र धुवाँ फाल्ने ट्राइसाइकल चढेर तेर्सैतेर्सो कलेज जानु मेरो अहिलेको आवश्यकता हो । मलाई न त गाउँको याद नै आउँछ, न साथीभाइ, मीठा खाने कुरा । न त्यो निबाराको रुखमा मदन र मैले लगाएको प्लाष्टिकको डोरीको पिङको नै । न मलाई रातो टीकाको याद आउँछ, न मलाई मावल जाने भीडमभीड बसको निसासिँदो पल नै याद आउँछ । न त मलाई गोडेको बगैँचा अनि सफा आँगनमा फुलेका सयपत्रीको वासना नै याद आउँछ, न मलाई हर्षमा घर फर्किएका गाउँले दाइ दिदीको नै याद आउँछ ।
मैले त मूलको पानी पनि बिर्सिसकेँ । त्यति टाढाको घरको छेउकै डिलमा फुल्ने गुराँस र चापको सुन्दरताको सम्झना पनि दिमागमा कहीँ खोज्नुपर्छ । मैले त घर अगाडि सुसाउने सल्लाहरू अनि मास्तिर विनोद दाइका बारीमा झाँगिएका अदुवाको ड्याङ् नै सम्झना आउन छोडिसकेँ ।
मलाई असत्यमाथि सत्यको जीतसँग कुनै मतलब छैन । मैले त्यो वास्तविकतामा देखेको विरलै छ । मलाई यी परम्पराका, सुगन्धका, सुन्दरताका हजार कुराहरू याद नआए पनि थोरै कुरा याद आउँछ जसले मेरो जीवन सार्थक बनेको छ । मलाई याद आउँछ मैले टीका थापेर मेरा आमाबुवाको खुट्टा ढोगेको, अनि आशीर्वाद दिँदै उहाँहरूका हातले मेरो शिरमा थपथप गरेको जुन म कहिल्यै बिर्सिने छैन ।
यदि दशैंमा उहाँहरूको खुट्टा ढोगेर आशीर्वाद थाप्ने दिन हो भने म मेरो जीवनका हरेक दिन दशैँ बनाएर बस्नेछु । के भयो र जाबो यो सालको दशैँ जाओस् किनकि मेरा हजार दशैंजस्ता दिनहरू आउन अझै बाँकी छन् । मात्र मेरो धैर्य र विश्वासमा अडेको छ मेरो यो अर्काे दशैं, दशैं के भनुम् खोइ मेरो अर्काे मङ्गलबार, बुधबार अनि हप्ता अनि गएको वर्ष झैँ दिक्कलाग्दो ड्युटी अनि पर्खेर बसेका पढाइ र अनगिन्ती परीक्षाका खातहरू अनि मिहिनेत गरेर बस्नुपर्ने अनगिन्ती अनिँदा रातहरू ।